SALADS OO LEH KAABAJAR SHIINE AH, FARMAAJO IYO DIGAAG, IYO SIDOO KALE CUNTOOYINKA KHUDRADDA SHIINEEYSKA LEH EE YAANYADA, BOORSOOYINKA, HADHUUDHKA, ULAHA QASHINKA IYO ALAABTA KALE - BEER CAGAARAN
Sidee loo kariyaa 18 saladh oo aad u fiican oo laga soo bilaabo Kaabashka Peking leh jiis, digaag iyo cuntooyin kale oo kaheli leh?
Mid ka mid ah wakiilada ugu caansan ee qoyska kaabash waa kaabajka Peking. Cunto ka soo kaabajka Beijing waa lagama-maarmaan u ah cunto caafimaad leh sababtoo ah content sare ee fitamiinada iyo borotiinka qudaarta. Salad ka soo kaabash Chinese waa gaar ahaan dhadhan fiican iyo caafimaad leh.
Waad ku mahadsan tahay habka qaab nololeed caafimaad leh, Kaabashka Peking wuxuu ku soo biiray kaliya ee China, halkaas oo ay ka timid, laakiin sidoo kale dalalka Yurub. In Russia, hoogaa, ma aha wax caadi ah, inkastoo ay dhadhan fiican iyo guryaha caafimaad leh. Maqaalkani wuxuu soo bandhigayaa salad ee kaabajka Peking, taas oo ka farxin kartaa iyo yaabi martidooda iyo kuwa ay jecel yihiin.
Faa'iidooyinka iyo waxyeelada khudaarta
Kaabashka Beijing waa badeecada lagu talinayo cunto caafimaad leh. Oo waxaad fahmi doontaa sababta, kaliya ka dib markaad arkeysid halabuurka alaab yaab leh: potassium, birta, kalsiyum, fiitamiinada A, B, C, iyo waxyaabo aad u yar - PP.
100 garaam oo ah kaabajka Chinese waxay ka kooban tahay 16 kalori.. Waxa kale oo ku jira 1.2 garaam oo borotiiyo ah iyo 0.2 garaam oo dufan ah, taasoo ka dhigaysa mid aan muhiim u ah kuwa daawada sawirka.
Alas, bilada ayaa leh laba dhinac, iyo meeshii ay ku jirto khibrad, waxaa jira marwalba khasaare. Marka lagu daro faa'iidooyinka, kaabajku wuxuu noqon karaa mid waxyeello leh, gaar ahaan tan waxay khuseysaa dadka qaba xanuunka gasriga oo leh kiimiko sare. Iyo, haddii aadan rabin inaad noqoto milkiile "faraxsan" calool xanuun, ha dhexgalin kiniinka iyo caanaha.
Waxaan soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyo ku saabsan faa'iidooyinka kaabajka Beijing iyo taxaddarrada marka la isticmaalo:
Kuwa ugu faa'iido leh waa isticmaalka khudradda cusub. Aan ka sii fekereyno sidii aad u diyaarin lahayd saladhyo kaabaj ah oo shinni ah oo leh jiis iyo khudaar, iyo sidoo kale si guul leh u isticmaal digaag iyo maaddooyin kale oo badan oo cuntooyinka ku jira kaabashka Chinese.
Si aad u diyaargarowdo saladku waxay u baahan doontaa:
400 garaam oo kaabajan oo Chinese ah;
200 garaam oo jiiska mozzarella jilicsan.
Iskuday ugu yaraan hal mar saladkan oo buuxa fitamiinada iyo antioxidants, waxaad ka dhigi doontaa saxan joogto ah miiskaaga. Weli! Ka dib dhan, ma aha oo kaliya cajiib ah dhadhan, laakiin sidoo kale qurux badan oo qurux badan. Kuwa aan jeclayn ama kaliya ma yaqaanaan sida loo yareeyo yaryar, iyaga oo sugaya cabsi kale: ha u baahnayn inay wax yeelaan!
Ku dar saliidda cuntada si fiicanna u walaaq.
Dhowr daqiiqo, ugu yaraan dadaal, iyo palette oo dhan dhadhan! Haddii aad u baahato sida fudud ee suura galka ah ee suurtogalka ah, sida ay xitaa qofka aan waligiis gacanta ku haynin mindi uu ku karsan karo salad, ka dibna waa kan!
300 garaam oo kaabash Beijing.
Ka dib, kala sooc farabadan ee basasha gogo 'yar yar oo ku jirta baaquli.
Waxaad ku dari kartaa madaxa toon, laakiin halkan waa arrin dhadhan.
Tuuji juuska nus litir ah.
Kala daadi 7 ukumaha digaagdoonka ah iyo 100 garaam oo ah mozzarella, ku rid korka khudaarta.
Si aad u xajiso goobta oo kaliya ma aha dhadhan, laakiin sidoo kale qurux, waxaad qurxin kartaa saytuun iyo rummaanka.
Iyada oo la dubay hilib cadcad iyo kubadaha jilibka
Waayo, kuwa jecel hilibka cad ee qandhada leh waxaa ku jira wax la yiraahdo oo laga yaabo inay noqoto mid aad u jecel.
200 daqiiqo oo laysku daro naas naaso ah oo la geliyo, milix iyo basbaas ay u dhadhamiyaan, ku rusheeyee sisinta.
Waxaad ku shiishaa kuleyl aad u sareysa illaa 5 daqiiqo. Halkan waxaad u baahan tahay inaad u taxadarto sida ugu macquulsan, adoo u oggolaanaya kuwa si joogta ah ugu mashquulsan saxanka, sababtoo ah hilibka aan la gubin! Tani waa lambarka shaqada mid ka mid ah samaynta Saladkan.
Iska yaree kala bar oo ah basbaas qolfaha iyo 1.5 koob oo kaabash Beijing ama, sida dadku waxay yiraahdaan, "jahawareer", ciriiriga. Halkan ka sii fiican, yar yar ayaad goyn doontaa.
Ku dar labo qaado oo ah hadhuudh.
Si aad u ilaaliso daawada qalalan, samee dhar: ku dar 4 qaado oo ah labeen dhanaan, 15 ml oo ah suugo soy ah, 2 xabo oo toon ah, cabitaan casaan ah iyo dhir udgoon.
Ku rid saladh soo dhalaal on saxan, top kala firirsan kubadaha jilibka, kuwaas oo si fiican looga helay feta oo leh dill iyo toon.
Dambi ahaan ku shub dhar gasho oo ku raaxee!
Haddii qandaraaska ugu dambeeya uu u muuqdo mid aad u adag, u fiirso tan:
Si yaryar u mid yaanyo yaryar oo waaweyn, basbaaska shanqarta ah, hal basal yar.
Ku rid weel qoto dheer.
Fry 200 grams oo laysugu daro digaagga, jarjar, jarjaran saliidda cuntada.
Salt iyo basbaas, ku dar dhir udgoon.
Ku rid hilibka diyaarsan ee khudaarta loo diyaariyey.
Roodhida jilibka dusha sare ku daadi, ku shub saddex qaado oo saliid saytuun ah.
Waxaad karkari kartaa 300 garaam oo digaag ah, waxoogaa cusbo leh oo biyo ah, ku rid hilibka saxan.
Ku dar galley, laba ukun oo la karkariyey, oo aan la jarjarey, dubay, laba qajaarka cusub iyo jiiska, oo ku saabsan 150 garaam.
Haddii aadan haysan shiil, laakiin waxaa jira digaag aan sigaar cabbin, ha niyad jabin, tanna waxaa jira ikhtiyaar.
Si fiican u jar 900 garaam oo kaabajka Beijing, 400 garaam oo digaag la cabbo, xoqin 2 xabo oo toon ah.
Ugu dambeyntii, ku dar mishiinka crackers, 150 garaam oo majones ah oo isku qasan.
Waxaan ku soo bandhigeynaa fiidiyowga ku saabsan sida loo diyaariyo salad ka mid ah kaabajka iyo digirta chicken ee Chinese:
Iyada oo yaanyada waaweyn ama cherry
Mid ka mid ah fursadaha ugu quruxda badan iyo midabada badan ee ku guuleysan doona!
150 garaam oo farmaajo kasta oo adag.
Kufi 400 garaam oo jilicsan, 10 jeeriga iyo 4 qaado oo ah hadhuudh.
Ku dar laba qaado oo saliidda cuntada ah.
Haddii aad leedahay yaanyada gacanta, weli waxaa jira doorasho weyn oo saladh ah dhadhan fiican leh. Kaliya:
dhowr ah yaanyo badan;
oo ah cantalyaaga berdaha ah;
2 duufaan ee dillada;
2-3 ukun la kariyey.
Waxaan soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyowga ku saabsan sida loo diyaariyo salad kaabajan oo cherry ah iyo cherry:
Si aad u raalliiso adiga iyo dadka aad jeceshahay waxaad isku dardargelin kartaa ulakac iyo jilbac.
badhkeed oo ah hadhuudh;
1 xaraarad jilicsan;
400 garaam oo kaabash;
100 garaam oo ah ulaha qashinka;
majones waxaa loo isticmaali karaa dharka.
Tani waa isbahaysi wanaagsan oo aad ku ciyaari kartid cunnooyin, iyo mar kasta oo aad saladh cusub hesho. Isku darka lafo-gurista iyo baako oo ah ulaha cagaaran oo leh laba ukun oo la karkariyey, qajaar la jarjarey iyo nus nus oo ah digir qasacadaysan, waxaad aad u la yaabi doontaa dhadhanka dhalaalaya iyo xasuusta.
Sida labiska, isticmaal labeen dhanaan ama majones.
Waxaan ku soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyowga ku saabsan sida loo diyaariyo salad kaabash shinni ah iyo ulaha qashinka:
Haddii aad tahay qof taageersan wax xiiso leh oo aan caadi ahayn, markaa tani waa xaqiiqda aad u baahan tahay.
Chop Beijing kaabajka.
Fry 300 grams oo ah digirta digaaga ah iyo laba luubo oo saliidda cuntada ah, iyaga jarjar.
Ku dar laba qajaar oo waaweyn iyo caanaha qashinka ama kirieshek.
Xilliga leh majones iyo cusbo.
Miyuu hore u ahaa mid aad u fudud?
Baradho la jarjarey.
Si fiican u khudaar cusub iyo kaabajka Chinese.
Ku dar mulki yar oo saytuun ah.
Ku dar laba qaado oo saliidda khudradda ah si fiican u walaaq.
Waxaan soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyo ku saabsan sida loo diyaariyo salad kaabajka iyo khajaarka Chinese:
Ma jeceshahay inaad qadariso? Haddii jawaabtaadu tahay haa, markaa waa inaad iska hubisaa laba saladh oo soo socda.
Doorashada lambarka 1.
400 garaam oo la jarjaray oo la jarjaray;
laba qajaar oo waaweyn oo waaweyn;
hilib cad la kariyey;
laba qaado oo ah digir iyo laba caano oo qashin ah;
dhammaantood waxay buuxiyaan majones;
guuri oo ku raaxee!
Doorashada lambarka 2:
Pound a kaabajka Chinese.
Labo jeer oo ah ukunta digaagga la karkariyey.
Laba cantoobe oo qashin ah.
150 garaam oo farmaajo ah, iyo salad degdeg ah oo sahlan oo diyaar ah.
Isticmaal majones sida labis.
Waxaan soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyowga ku saabsan sida loo diyaariyo saladh oo kaabaji ah iyo khudrado:
Hadhuudhka qasacadaysan wuxuu keenaa salad badan oo casiir leh oo dhadhan fiican leh, iyo dibedda - si aad u qurux badan, indho qabasho leh. Cuntadani ma sii soconayso miiska.
Oo laba saldhig oo dhagax ahna kabuuji;
jarjar cantalyaaga ah ee kala badh;
adigoon caleenta ku jiirin, ha ahaado jiis;
ku dar Kaabashka shiidan ee shiidan;
laba malqacadood oo saliid saytuun iyo cusbo.
Waayo, kuwa caajiska ahu waxay cunaan waxa la jecel yahay, Oo waxaa ku jira waxgarasho wanaagsan oo wanwanaagsan.
Iska jar wiishka.
Ukunta ukunta digaagga ah iyo qajaarka cusub.
Dildilaaca digaagdoonka ah, ku cad cad isku dar ah saliid saytuun ah iyo dhir udgoon si ay u dhadhamaan, shiil. Iska ilaali, hilibka waa in la shiilo oo eega cuntada, oo aan gubi!
Iska yaree fillet dhamaystiran oo googo ah.
Isku-darka badhkeed oo badhkeed ah, laba nooc oo duufaan ah, laba qaado oo saliid saytuun ah.
Si fiican u walaaq, cusbo u dhadhami.
Waxaan soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyo ku saabsan sida loo diyaariyo salad kaarar ah iyo hadhuudhkii Shiinaha:
Xulashada cunto kariska oo degdeg ah
Haddii aad haysatid daqiiqado yar oo wakhti bilaash ah illaa martida ay yimaadaan, oo aad rabto inaad iyaga la yaabiso wax gaar ah, isticmaal cuntooyinka hoose.
Beijing 300 garaam + hadhuudhka 2 qaado ah + dill 2 roodhida + casriga ah.
Beijing 400 garaam + 2 ukun digaag + badhkiis oo ah digir + digirta caanaha leh.
Siyaabaha loo adeegsado suxuunta
Waxaad u adeegi kartaa salad on gabal oo dhan kaabajka Chinese, la dhigay on xeedho.
Ikhtiyaar ahaan - ku rid tartan, miiska saaran sidii cunto fudud.
Intaa waxaa dheer, waxay u eegi doontaa quudinta asalka ah ee muraayadaha.
Haddii aad rabto inaad la yaabto, waxaad salad ku dhejisaa koob la cuni karo.
Sida aad arki karto, kaabajka Shiinaha waa sheyga kaas oo aad diyaarin karto cuntooyin badan oo kala duwan, kuwaas oo ay ku mideysan yihiin hal shay - dhadhan fiican.